Novitiation Ceremony | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
Novitiation Ceremony	Posted by mm thinker on September 10, 2007
Posted in: Experience, Photo.	Tagged: Art, Photo.	Leaveacomment
တောကရှင်ပြုတွေကမှ တကယ့်ပျော်စရာ။ ရှင်ပြုပွဲဒါယကာ နဲ့ ရွာတော်တသိုက်ကတော့ ကျုပ်တို့ ထရေ(ထန်းရည်)ဆိုင်က ထပြန်တော့ မှောက်နေတုန်းဗျ။ နေ့ခင်းကြီး။ ပျော်ကြပုံများ ပြောပါတယ်။ ကျုပ်အဖေက သူငယ်ငယ်က ရှင်ပြုဓာတ်ပုံမှာရေးထားတာလေး သွားသတိရတယ်။
အခုခေတ်မြို့က ရှင်ပြုတွေကတော့ တောကလောက် ပျော်စရာမကောင်းတဲ့ဘူးအောက်မေ့တာပဲ။ Rate this:Share this:EmailTwitterFacebookPrintRedditLike this:Like Loading...
← Nat Offering Ceremony	Global Warming? →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...